कोरियन भाषा परीक्षाः आज पहिलो दिन कति भए सहभागी? - Everest Dainik - News from Nepal
कोरियन भाषा परीक्षाः आज पहिलो दिन कति भए सहभागी?
काठमाडौं, जेठ २५ । आजदेखि यो वर्षको कोरियन भाषा परीक्षा सुरु भएको छ। बिहानी सिफ्टको परीक्षा सकिएको छ भने दिउँसो २ बजे दोस्रो सिफ्टको परिक्षा भइरहेको छ । इपिएस कोरिया शाखाका अनुसार आज र भोलि गरी दुई दिनसम्म चल्ने परिक्षामा यस वर्ष ९२ हजार ३ सय ७६ जना परिक्षार्थी सहभागी हुने छन् ।
परीक्षाका लागि काठमाडौंमा २१, ललितपुरमा सात र पोखरामा ४ स्थानमा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ। यस वर्षको इपिएस कोरियन भाषा परीक्षा दिनेको संख्या अघिल्ला बर्षहरुभन्दा बढेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० हजारभन्दा बढीले वृद्धि भएको शाखाले जनाएको छ। यस वर्ष सबैभन्दा बढी म्यान्युफ्याक्चर क्षेत्रमा काम गर्न चाहने परिक्षार्थीको संख्या ६३ हजार ४ सय ८९ जना रहेको छ।